Ny fitsipiky ny cannabis sy ny hetra mifehy ny hetra - Mampiasa ny lalàna marijuana ny Illinois
Ny fitsipiky ny otrikaina sy ny lalàna momba ny hetra
Inona ny lalàna mifehy ny hetra sy ny hetra?
Nandalo ny lalàna mifehy ny hetra sy ny hetra i Illinois tamin'ny 31 Mey 2019. Izy io dia niditra tao amin'ny fitsipi-pifehezana cannabis sy ny hetra izay mitady hanitsy ny hadisoana amin'ny ady amin'ny zava-mahadomelina any Illinois. Izy io dia endrika iray tena voafehy ara-dalàna ny marijuana momba ny marijuana izay mametraka ny tsena ho an'ny orinasa kely sy ny fiarahamonina ara-tsosialy.
cannabis mifehy sy ny hetra hetsika
Mandrakotra fohifohy ny fizarana lehibe izahay, antsoina hoe Article, amin'ny lalàna mifehy ny gnabis sy ny lalàna momba ny hetra. Ity ny lahatsoratra hodinihintsika;
Andininy 1: Lohateny fohy, fikarohana ary famaritana;
Andininy 5: Manam-pahefana
Andininy 7: Fiantohana ara-tsosialy
ARticle 10: fampiasana manokana
Andininy 15: Ireo fandaminana fanararaotana
Andininy 20: Ivotoerana fambolena
Andininy 25: Programme pilotne cannabis Vocational ho an'ny College College
Andininy 30: Mpanangana asa tanana
Andininy 35: Fikambanana Infuser
Andininy 40: Fikambanana mpitatitra
Andininy 45: Fanamafisana sy fiarovana
Andininy 50: Labs sy fitiliana
Andininy 55: Fanomezana ankapobeny
Andininy 60 & 65: hetra tombony sy haba
Andininy 900: Fanitsiana
Andininy 999: Miscellaneous
Ny fampiasa amin'ny mariazy Illinois vaovao (cannabis misy mihoatra ny 0.3% THC) dia sarotra be ary mitaky olana maro izay mpisolovava orinasa manana traikefa indostria cannabis tena afaka manampy ny orinasa hitombo, mpampiditra na dispensary anao.
Lahatsoratra momba ny lalàna mifehy ny vatan-tsakafo sy ny hetra any Illinois
Ny fampiasan'ny olon-dehibe ny lalàna rongony dia nolanian'ny mpanao lalàna tao Illinois, araka ny hitanao fa fotoana maharitra naharitra ny fotoam-pivorian'ny mpanao lalàna nanomboka tamin'ny voalohan'ny taona ka hatramin'ny fampiatoana ny fivoriana tamin'ny 31 Mey 2019. Ary ny governora dia manao sonia ny volavolan-dalàna - avy eo manomboka ny fizotran'ny lalàna. Hisy ny fangatahana navoaka tamin'ny Oktobra 2019. Hiresaka momba izany bebe kokoa amin'ny horonantsary manokana izahay sy ny lahatsoratra navoakanay tamin'io lahatsoratra io.
Ny lalàna mifehy ny rongony sy ny hetra dia mizara ho andininy 999. Saingy natomboka tamin'ny fivoriambe fanamarihana anarana talohan'ny fanitsiana rehetra izay mety nandalo 5 toy ny mahazatra ny volavolan-dalàna. Andao hodinihintsika ireo andininy isan-karazany ao amin'ny lalàna:
Andininy 1: Fikarohana sy famaritana fohy amin'ny lohateny fohy. Ity dia lahatsoratra iray tena manan-danja izay mamorona ny "art-art art" ao amin'ny lalàn'i Illinois vaovao momba ny fampiasana olon-dehibe amin'ny cannabis, indrindra ny dikan-teny izay manana mihoatra ny 0.3% amin'ny THC.
Andininy 5: fahefana - Miampanga amin'ny ankapobeny ny departemantan'ny Ag hanitatra (manana ny zavamaniry rehetra izao) - marijuana ara-pahasalamana, hemp indostrialy ary rongony tsy ho ela ny olon-dehibe.
Article 7: Equity ara-tsosialy amin'ny rongony - Fifanarahana anarana hafahafa - Drafitra fampidirana fitoviana ara-tsosialy - Tena lehibe
Andininy 10: Ny fampiasana samirery manokana mampanontany tena ahy raha toa ka nampiana ny fitoviana ara-tsosialy taorian'ny volavolan-dalàna voalohany - na angamba noheverin'izy ireo fa tsara vintana 7 - ny fampiasana rongony manokana. Mihoatra lavitra ny fitomboan'ny trano izany - mankany amin'ny fanavakavahana, sazy noho ny fampiasana tsy ampy taona na tsy nahazoana alàlana, ny adidy amin'ny mpampiasa ary ny tanjon'ny politika
Andininy 15: Fikambanana voampanga - ny voalohany dia ho mpitsabo ary hamatsy vola ireo programa momba ny asa.
Tsy handainga aho fa fizarana lehibe manomboka amin'ny pejy 63 - mifarana amin'ny pejy 162 - pejy 100 amin'ny dispensaries - 75 hatramin'ny Mey 2020 - ary 110 amin'ny faran'ny 2021
Andininy 20 - foibe fambolena, izay mikatona noho ny fambolena marijuana ara-pitsaboana efa misy, afaka manana hatramin'ny 30 ianao amin'ny Jolay 2021. - Tsy misy afa-tsy 20 ny fahazoan-dàlana hamboly
Andininy 25 - programa mpanamory fiaramanidina rongony any amin'ny oniversite - ho avy amin'ny taom-pianarana 2021-22. Asa amin'ny mari-pahaizana momba ny rongony
Andininy 30 - Mpamboly asa-tanana - izay misy ny tena hetsika ho an'ireo mpamboly orinasa kely dia 40 ho an'ny 1 Jolay 2020. Tsy misy ny M&A hatramin'ny 21 desambra 2021 - toa misy fotoana hiomanana amin'ny onja M&A amin'ny 2022 amin'ny rongony. Fambolena asa tanana 60 hafa no homena ho an'ny zazalahy krismasy 2021 Toa ny 2022 no ho taonan'ny rongony any Illinois. Aorian'io fotoana io dia afaka mitombo ny isa fa tsy mihoatra ny 150. Ity dia ampahany lehibe amin'ny lalàna izay hodinihintsika amin'ity fahavaratra ity - fa asio ny sainao ho amin'ny fizarana (n) eo amin'ny pejy 219
Andininy 35 Fikambanana infuser - avy amin'ny fanamarihako dia toa toy ny lisansa mpikirakira ity. Raha manao "infusion" ianao - dia miseho 2x ao amin'ny lalàna ny "licence de processeur" ary ity misy fambara. Ny fikambanana mampiditra dia mahazo ny fahazoan-dàlana hiasa. Na izany aza, hita fa misy fahasamihafana eo amin'ny fanodinana hahazoana ny fitrandrahana, ary ny fampidirana an'io fitrandrahana io amin'ny zavatra hafa toy ny edibles.
Andininy 40 Fikambanana fitaterana - Zavatra kely amin'ny sarany amin'izany - ireo fahazoan-dàlana rehetra ireo dia mitaky ny fananana ny drafi-pandraharahana rehetra sy ny antontan-taratasin'orinasa - toy ny politikam-piarovana, ny polisin'ny angovo, ny politika ary ny fikambanana toa ny ankamaroan'ny orinasa. Ka rehefa manontany ahy ny olona hoe ohatrinona ny vidin'izany - tsara - betsaka. Mila drafitra ianao, ary hisy mpanolo-tsaina hivarotra azy ireo aminao - tadidio ny manontany azy ireo raha manana adidy iraisana amin'ny orinasanao izy ireo - tsy manao izany izy ireo
Andininy faha-45 fampiharana sy hery fiarovana
Andininy 50 - Labs sy fitsapana - andao hivoatra ny fahadiovan'ny rongony ho an'ny fanafody
Andininy 55 - andininy ankapobeny - politika famonosana, fandringanana - ny faritra rongony voafetra - fanaovana lalàna - fahamendrehan'ny fifanarahana, mety hanimba ny tetikadin'ny fatiantoka.
Andininy 60 & 65 ny hetra - Somary mahaliana izany ary isika dia handrava ny toerana alehan'ny hetra amin'ny sarin'ny pie dia manoratra ny tenany ary mieritreritra aho fa hanolo ny pie amin'ny mpiray ao amin'ny tabilao isika.
Andininy 900 - Fanitsiana - fitsambikinana lehibe tao amin'ireo fivoriambe tany - ary ny faritra lava indrindra - hitanao, maro ny lalàna tsy maintsy nasiam-panitsiana efa ho 300 pejy amin'ny lalàna no ao anatin'ny fanitsiana
Ary farany, Article 999 - miscellaneous - olan'ny fanitsiana sy ny daty mahomby
Ka izay ny lalàna, inona no dikan'izany rehetra izany? Misoratra anarana amin'ilay fantsona manatevin-daharana ny vondrona facebook anay momba ny lalàna fampiasan'ny olon-dehibe any illinois ary andao ny 2022 rehefa ho matotra kokoa ny rongony ary hanatona azy ny M&A.
Maninona ny orinasanao voaroaka dia mila toro-hevitra ivelan'ny trano
by Tom | Jun 16, 2020 | Ny varotra amin'ny razana Ancillary, banky cannabis, Drafi-piasan'ny cannabis, Vaovao Momba ny Legalisation Cannabis, torohevitra ankapobeny, Fandresena fahazoan-dàlana cannabis
Ny tsenan'ny lozika ara-dalàna be mpampiasa dia tranokala feno lalàna sy fitsipika. Ireo lalàna ireo dia azo ampifangaroina indraindray ary misy ny fanjakana sasany, toa an'i Pennsylvania sy Florida, mizaka olana amin'ny fampiharana ny tetika fahazoan-dàlana manokana azy ireo. Angamba tsy mahagaga raha misy ny ...